Mivoatra ilay andro ratsy: mbola hitohy ny ora-mikija amin’ny faritra maro | NewsMada
Mivoatra ilay andro ratsy: mbola hitohy ny ora-mikija amin’ny faritra maro
Nilaza ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrinomby, omaly, fa nivadika ho andro ratsy ilay tangoron-drahona narahi-maso tao amin’ny lankandranon’i Mozambika. Omaly mitataovovonana, tany amin’ny manodidina ny 400 km andrefana avaratra andrefan’i Besalampy ny nisy ny ivony. Malefaka ny rivotra entiny, 40 km/ora eo ho eo, arahina tafiotra sy kotroka.
Manatona ny morontsiraka andrefana io andro ratsy io, halina, hahakasika an’i Melaky ny orana entiny anio tontolo andro ary tombanana ho lasa “dépression tropicale” amin’izay fotoana izay. Andrasana, araka izany, ny fisian’ny tafiotra amin’ny ilany andrefana sy ny morontsirak’i Boeny.
Alohan’ny hidirany an-tanety, ahina ny hivoarany ho “tempête tropicale modérée”. Mba hisorohana ny loza mety hitranga, entanina ny distrikan’i Besalampy, i Maintirano ary Antsalova mba hampiatra ny fepetra amin’ny filazana miloko maitso.
Ho betsaka ny rotsak’orana ao Melaky sy ao Boeny ary hiitatra hatrany amin’ny atitanin’ny ilany andrefana izany.
Etsy andaniny, an-dalam-pivoarana ho rivodoza ihany koa ilay tangoron-drahona ao amin’ny ranomasimbe Indianina ao avaratry ny Nosy Rodrigues. “Dépression Tropicale” ny sokajy misy azy ka 55 km/ora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra 70 km/ora.
Omaly maraina, tany amin’ny 2 310 km atsinanan’Antalaha ny nisy ny foibeny. Mizotra miatsinanana somary atsimo atsinanana izy ka mahafaka 17 km/ora. Tsy hisy fiantraikany amin’ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fivoarany.